Wikipedia Soomaaliga waxaa ku jirta 8,214 maqaal, Hubi gaarista ama habka mobilka
Cuf is-jiidad (ingiriis: Gravity) waa awood dabiici ah oo aan la arki karin oo aan la maqli karin laakiin la dareemi karo. Garaafiti waa awoodda ay yeeshaan sheyyadda miisaan oona ku heysa dhulka. Tusaale ahaan haddii aad shey kor u tuurtid hoos ayuu u soo dhacayaa. Waxa sababa in shey walba oo kor loo tuuro uu hoos ugu soo dhaco waa awooda la yiraahdo Cuf is-jiidad ayaa hoos u soo jiidata. Sheyyada waaweyn ee dabiiciga ah sida dhulka, dayaxa, qorraxda iyo xiddigaha waxey leeyihiin awood Cuf is-jiidad la yiraahdo oo wixii u soo dhawaada wey soo jiitaan.
Sheyyada waaweyn ee dabiiciga ah sida dhulka, dayaxa iyo qorraxda way kala Cuf is-jiidad badan yihiin. Mid ba' midka uu ka weyn yahay wuu ka Cuf is-jiidad badan yahay. Tusaale ahaan awooda Cuf is-jiidad ee uu dhulka leeyahay waxey ka xoog badan tahay awooda Cuf is-jiidad ee uu dayaxa leeyahay sababtoo ah dhulka ayaa ka weyn dayaxa. Awooda Cuf is-jiidad ee ay qorraxda leedahay waxay ka xoog badan tahay tan dhulka uu leeyahay sababtoo ah qorraxda way ka weyn tahay dhulka.
Dayaxa wuxuu ku meereystaa dhulka oo waxaa soo jiita Cuf is-jiidad dhulka. Dhulka wuxuu ku meereystaa qorraxda oo waxaa soo jiita Cuf is-jiidad qorraxda. (SII AQRI)
Saliid Macsaro Waa saliid Cuntada lagu Cuno. waxaa laga sameeyaaa geedka Sisinta. Saliida waxaa aad laga isticmaalaa wadanka Soomaaliya iyo wadamada Aasiya sida Hindiya iyo Shiinaha.
Taariikhdu Maata Waa 20 May 2022 Isuduwaha Waqtiga Caalamiga (UTC) – Hagaaji Bogga
Wikipediyahaan waxaa ku qoran Af-Soomaali. waxaa la bilaabay 2001, hadda waxaa ku jirto in kabadan 8,214 oo maqaal. Luqadaha kale oo ugu waa weyn hoostaan ee ku tixanyihiin